မေ 16, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ကလေးများ, tutorials
လှမ်း 1 Press the Band in half along the fold line. လှမ်း2With the Band Wrong Side out pin the facing into the seam allowance at both ends. Stitch and clip the corner. Turn Right Sides out and press. လှမ်း3Cut two pieces of velcro 2.5cm long. Separate the pieces and apply either […]
ဟိုင်ဒီနှင်းဆီပန်း Headband သင်ခန်းစာ
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. elastic 3cm ကျယ်ပြန့်များထဲမှအရှည် Cut. The length will be half that of the Back pattern piece. Fold the Back and Front headband pieces in half Right Sides together. ယင်းချုပ်ရိုးစရိတ်ပူးတွဲလိုက်ပါ. လှမ်း2Turn the Back and Front RS out. Move the seam line […]